Ukhathalelo loMthengi + -Hebei Shenli Rigging Co., Ltd.
U-Hebei Shenli uzibophelele ekuphuculeni ngokuqhubekayo kwiimveliso kunye neenkonzo esizibonelelayo, kwaye sizama ukuhlangabezana nezona mfuno ziphezulu zabathengi bethu. Ukuqinisekisa iimfuno zabasebenzisi beemveliso zethu ziyaneliseka, singathanda impendulo yakho ngalo naliphi na ixesha. Ngesi sizathu, inkampani yethu iqale isicwangciso sokhathalelo lwabathengi kunye nenkonzo.
Inkampani yethu ihlala ikholelwa ekubeni thina kunye nabathengi bethu "luluntu lwamva ekwabelwana ngalo". Ukusebenza kunye kuya kusenza sobabini sibe ngcono kwaye siphumelele kwintsebenziswano.
Sineenkonzo ezintathu ezahlukeneyo kwiQhinga lethu “loKhathalelo loMthengi +”.
Sibonelela ngokupheleleyo kumthengi wethu onke amaziko ovavanyo ngesisa njengeqela lesithathu lotyalo-mali ukubanceda baqhubekeke nezinye iimveliso ekufuneka bezivavanye ekhaya.
Unyaka omnye "Isiqinisekiso soMgangatho emva kweNkonzo yokuThengisa" kuyo yonke impahla yethu. Kwaye umthengi wethu unokufumana inkonzo eyongezelelweyo xa ingaphaya kwexesha lesiqinisekiso kwaye sikulungele ukubanceda ukusombulula yonke ingxaki yabo;
3.Xa iimpahla zethu zinengxaki esemgangathweni, inkqubo iya kuba yile ilandelayo:
A. siyakukhumbula ezinye iisampulu zala bhetshi yeempahla ukuze sikwazi ukwenza yonke inkqubo yovavanyo kwakhona. Ukubandakanya uvavanyo lwempahla eluhlaza, uvavanyo lokuqaqadeka, ukophula umthwalo wovavanyo lokuqina kunye nokukhathala kovavanyo.
B.Xa iisampulu ziphumelele zonke iimvavanyo eziyimfuneko kwaye zibonisa ukusebenza kakuhle. Siza kuhlalutya ukuba umsebenzisi usebenzisa iimveliso ngendlela echanekileyo kwaye siya kubonelela ngengcebiso ngokufanelekileyo.
Ukuba ingxaki ayinakusombululwa ngenyathelo elifakelweyo, inkampani yethu iya kuthumela abasebenzi bobuchwephesha kwinkampani yakho kwaye isombulule yonke ingxaki ebusweni.